Knight and Day (2010) – Happy Movies
Tom Cruise နဲ့ Cameron Diaz တို့ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ…နှစ်ယောက်လုံးက
ဝါရင့်တွေပီပီ ဇာတ်ကားတစ်လျှောက်လုံး ကြည့်ရှု သူအပေါင်းကို စိတ်ပါဝင်စားအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်…ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဆန်ဆန် Action ကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
အလိုက်ဖက်ဆုံးဇာတ်ကားပါ…Movie Review ကိုတော့ Ma Khin oo may ရေးသားထားတာ
သဘောကျလို့ သူ့ဘလော့ကနေ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…..
လေဆိပ်တစ်ခုမှာ တွမ်ခရုစ် က ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတယ။် မျက်စိက ကျားရဲ ..အဲ လေ စွန်ရဲသဖွယ် ပစ် မှတ် ကို လိုက်ရှာနေတယ။်ဟော..တွေ့သွားပြီ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြာရိပြာယာ နဲ့ လေဆိပ်ထဲကကို ဝင်လာတယ်။ လက်ထဲမှာလက်ဆွဲ အိတ် hand carry luggage တစ်ခုဘဲပါတယ်။ ခဏနေတော့ မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ တွမ်ခရုစ် က မတော်တဆတမင်ဝင်တိုက်မိတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ကြဲပလားသွားတယ်..ပြန်ကောက်ပေးတယ်.. စကားပြောကြတယ်။ ဘာတွေ ပြောသလဲ မမေးပါနဲ့ ကိုယ်လဲမသိဘူးထုံးစံအတိုင်း…တောင်းပန်ပါတယ်နော်….ကိစ္စမရှိပါဘူး…… ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကိုသတိထားဦးမှ…..တစ်ယောက်ထဲလား… ဂရုစိုက်နော်… အဲသလိုမျိုးတွေ ဘ ဲဖြစ်မှာပါ.ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နားလည်ယူ ဘာသာြ့ပန်လိုက်တယ်။
တစ်ခါလေယဉ်ပေါ်မတက်ခင်မှာဝင်တိုက်ကြပြန်ရောတစ်ခါ…တောင်းပန်ကြပြန်ရောတစ်ခါ..ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ခင်သွားတာပေါ့။ အကြံရတယ်။နောက်တစ်ခါလေဆိပ်ဆင်းရင် ဘာမှ မသယ်ဘဲနဲ့ အိတ်တစ်လုံးဘဲသယ်ပြီးနောက်ကျမှသွားမယ်။ အဲသလိုပြာယာပြာယာ အိုက်တင်လုပ်မယ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ဝင်တိုက်ရငသူငယ်ချင်းဖြစ်ရတာပေါ့ မဟုတ်ရင် လောကကြီးက ပျင်းစရာကြီး.။ မတိုက်တော့လဲဘာဖြစ်လဲ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့။မိန်းကလေးများငယ်စဉ်ကာလမှ သိတ်ရှက်တတ်ပြီး ကြီးလာရင်. ..အဲလေမိန်းကလေးများလို့ပြောရင် အမှု ကြီးမယ်…ကိုယ်ဘဲဆိုပါစို့….အသက်ငယ်တုံးကရှက်တတ်သလောက် အခုကြီးလာတော့မရှက်တတ်တော့ဘူး။ ဟိုတုံးက ဖုံးဖုံးဖိဖိဝတ်ခဲ့သမျှ အခုဖော်တာတွေ ကြိုက်တယ် ပေါ်လေ..ကြိုက်လေဘဲ။
ပုံုပြင်လေးတောင်သတိရမိသေး.။ ရွာထဲမှာ လူဆိုးကြီးသောင်းကျန်းနေလို့တစ်ချို့မိန်းကလေးများက တံခါးသေချာပိတ်အိပ်ကြသတဲ့ တစ်ချို့ ကတော့တစ်ခါးဖွင့်အိပ်ကြသတဲ့။ ကိုယ်သာဆိုရင် ဖွင့်မလားပိတ်မလားဆိုတာကိုတော့မပြောပါရစေနဲ့။အဲသလိုနဲ့လေယဉ်ပေါ်တက်ဘို့လုပ်ကြတယ်။ကင်မရွန်ဒေစ်ကseat..မရသလိုဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့seat ရသွားပြီး လေယဉ်ကြီးကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတယ်တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အသိအမှတ် ပြုကြတယ် ထိုင်တာတော့အတူတူမထိုင်ကြဘူး။အရှေ့အနောက် လှမ်းစကားပြောကြတယ်။ ကိုယ်သာဆိုရင်လား.. အတူတူသွားထိုင်မှာပါ.အေးလေ… စကားပြောတာဘဲ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ်ကအော်မပြောတတ်ဘူး စကားပြောတာလဲခပ်တိုးတိုးဘဲ အိုက်တင်နဲ့ ကိုယ့်zif ကိုယ်ကြားရုံလေနဲ့ ပြောတာဆိုတော့အကွာအဝေးက ဝေးလို့မဖြစ်ဘူး…လက်တွေ့မှာလဲ ဘတ်စကားကားစောင့်ရင့်နဲ့ မျက်မှန်း တန်းမိ တဲ့မြန်မာအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ရှိတယ်။ ပထမတော့သူတို့
ဘာသိ ဘာသာဘဲ. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သူတို့ဘေးသွားထိုင်ပြီးစကားသွားစပြောတာ.အခုမှ စသိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ဘို့ဆိုတာကိုယ့်အတွက်တော့မခဲယဉ်းလှပါဘူး. Custom service sector မှာလုပ်နေလို့လဲပါမှာပေါ့။ အဲသလိုဘဲ ရုပ်ရှှုင်ကြည့်ရင် မင်းသမီးနေရာကနေကိုယ်က လိုက်ခံစားနေတာ . ကိုမဆလာက သတိပေးရတယ်.. မင်းက မင်းသမီးမဟုတ်ဘူး…မင်းသမီးအမေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတယ်.သူ့ဘာသာသူ ဆိုလိုချင်တာဆို..အဓိကကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာဘဲ။လေယဉ်ကလည်းလူနဲနဲလေး ခဏနေတော့ ကင်မရွန်ဒေစ် က အိမ်သာ အဲလေ. gents. loo…..toilet ထဲဝင်ပြီးမိတ်ကပ်သွာဖို့တယ်…အခုခေတ်စားနေတဲ့အီးမေလ်တွေပြန့်နေတဲ့ရှေ့မျက်နာနောက်ထားတော်မူကြပါဆိုတဲ့ဇာတ်ကားထဲကမင်းသမီးလိုမျိုး. ဟိုပင့်ဒီပင့်လုပ်တယ်။ ပါးစပ်ထဲကို..ဘာတွေညာတွေဖျန်းတယ်။မင်းသား မင်းသမီးက နဲနဲတော့ကြီးပြီလို့ ခလေးတွေကပြောချင်ရင်ပြောပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့အရင်အတိုင်းဘဲ နဲနဲအိုလာသွားတာကလွဲလို့ နှစ်သက်နေတုံးဘဲ။ ငယ်ချစ်တွေကိုး..ဟိုတုံးက အဲသလိုဘဲ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်အလှုငွေ ကောက်တာ ထင်တယ် အစိမ်း ၁၀၀ လှူ ရင် တွမ်ခရုစ်နဲ့ တယ်လီဖုန်းပြောခွင့်ရတယ်။အဲဒီခေတ်ကနိုင်ငံခြားမရောက်သေးလို့ရောက်လို့များကတော့လူလစ်တုံးသမလိုက်မယ်။ပြီးတော့လေယဉ်ပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေနဲ့တွမ်ခရုစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။မင်းသားဘဲနိုင်တာပေါ့မေးနေရသေးလား..လေယဉ်မယ်ရော..လေယဉ်မောင်းတဲ့သူတွေရောအားလုံးရှုံးသွားတယ် အများနဲ့တစ်ယောက် တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကင်မရွန်ဒေစ် ကလည်း အပြတ်ရှိုင်းနေတယ်။ အခန်းထဲမှာ..သူတွက်လာတော့တွမ်ခရုစ်ကအအေးခွက်ကလေးနစ်ခွက်ကိုင်ပြီး သောက်နေတယ်။
စကားတွေပြောကြတယ်..သိတ်ပြောနိုင်ကြတာဘဲ ကိုယ်လဲနားမလည်တော့ခက်တယ်။ခဏနေတော့လေယဉ်ကြီးက မှောက်မလိုဖြစ်တယ်။အဲဒါနဲ့ တွမ်ခရုစ် ကနေလေယဉ်ဝင်မောင်းတယ်။ သူကလေယဉ်လဲမောင်းတတ်တယ်။ရုပ်ရှင်မို့လို့သာယုံလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမြေပြင်ပေါ်ကို ထိုးဆိုက်ပြီးလေယဉ်လဲပျက်မတတ်ဖြစ်သွာတယ်.. သူနဲ့သိခဲ့တာ မပြောနဲ့နော်လို့ တွမ်ခရုစ် ကမှာလိုက်တယ။် တွမ်ခရုစ် မှာလို့ကတော့ ကိုယ်ကတော့ခေါင်းညိတ်မှာဘဲ။
တစ်ခါရဲတွေလိုက်လာတယ်.ကင်မရွန်ဒေစ်က သူလဲမသိဘူးလို့ခံငြင်းတာဘဲတွမ်ခရုစ်ရောက်လာပြီးကယ်ထုတ်သွားပြန်ရော..ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိ.ရုပ်ရှင်မို့လို့ဘဲ။ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။မယုံရင် ထရေလာကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ ယူကျုမှာရှိတယ်။..ပြီးတဲ့သကာလကြတော့ တွမ်ခရုစ်က သူသွားမယ်တဲ့ ကင်မရွန်ဒေစ်ကိုလိုက်မလားလို့မေးတယ်။ နားလည်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ခန့်မှန်းကြည့်တာခြေဟန်လက်ဟန်တွေ နဲ့ ခန့်မှန်းကြည့်ရတာပေါ့။
သူ့ကိုယ်သူလက်ညိုးထိုးပြီး with me တဲ့ ။ နေခဲ့မယ်ဆိုရင် without meဆိုပြီး. ထွက်သွားပြီး ကားအကောင်းစားကြီးတစ်စီးပေါ်ကနေထိုင်ပြီးသွားစောင့်နေတယ။်ကင်မရွန်ဒေစ်ခဗျာဝေခွဲရခက်နေရှာတယ်နောက်ဆုံးတော့သိတတယ်မဟုတ်လား .ကိုယ့်လိုဘဲ သူလဲမငြင်းနိုင်ပါဘူး.ပါသွားတယ်။ကင်မရွန်ဒေစ် လဲ အတော်ပိန်အောင်.အဲလေ ပိန်နေတယ်။ ပိန်နေတော့ဘာဖြစ်သလဲ ..လှတာပေါ့။ ဝတ်လို့စားလို့လဲအဆင်ပြေတယ်။ အဲဒါနဲ့ပစ်ကြခတ်ကြ..နောက်ဆုံးမှာတော့ တွမ်ခရုစ် ကို ကင်မရွန်ဒေစ် က with me…… လား. Without me လား တစ်ပြန်မေးပြီး အပိုင်သိမ်းသွားတယ်. ဟင်း။ ………..